Uma ingane uyakhala umama nazo zonke ekhaya ngokushesha ukushiya konke futhi bashesha ukuthola ukuthi kungani ingane liqhumise wakhala izinyembezi. Kusuke kufanele kube njalo. Phela, kuphela ingane encane ukukhala kwaso kungaletha omdala Imininingwane ezibucayi. Ukhala lapho silambile, uma unento engizwisa ubuhlungu noma-ke nje enesithukuthezi futhi idinga ukunakwa. Ake sibone ukuthi yini ukukhala ingane grudnichka.
Izimbangela ukukhala ingane
Small, abasanda kuzalwa, ingane namanje akakwazi ukukhuluma. Kodwa ukuxhumana nezwe, ukuxhumana izifiso nemizwa yabo angakwenza. Futhi zokuxhumana kwenzekani ngosizo ukukhala. Kungenxa yalesi imizwelo ungafunda ukuthi ingane efuna okwamanje. Mhlawumbe udinga uku ukunakwa noma udinga usizo lwezokwelapha. Funda ukuthi kungani ukukhala umntwana, iziphi izizathu?
Okokuqala, uma grudnichok ukukhala futhi bememeza, kusho angaba elambile. Lokhu ikhala elikhulu kakhulu futhi ngokuvamile iqala ngokuzumayo, ngaphandle kwesizathu. Enough ukunikeza izinsana ukudla (webele noma ibhodlela nge ingono egcwele ukudla), uyama futhi iqala nge iphango ikakhulukazi ukudla.
Okwesibili, ingane ngosizo izinyembezi ezama ukuziqhakambisa ngokwabo. Mhlawumbe yena waba unesizungu futhi ukhathele wonke amathoyizi. Mhlawumbe afuna ukuzizwa nephunga likamama uzizwe imfudumalo umzimba wakhe.
Okwesithathu, umntwana uyakhala uma kubanda, noma, Ngakolunye uhlangothi, kakhulu isongwe, futhi kuyashisa. Xoxela ithole grudnichka lokushisa.
Okwesine, ke ziyokhamuluka uma okuthile okukuphatha kabi. Mhlawumbe ingane ishayise noma amanga esiyinkinga. Ngokwesibonelo, e-inabukeni zihambisana, okuyinto ubeka ingcindezi isikhumba. Nokho, kunezimo eziningi ezinkulu. Ngitshele kabanzi, futhi kwezinye izimo, abazali Kumele bahlole isimo futhi ukuthatha izinyathelo esiphuthumayo.
Ukukhala? Isizathu sokukhathazeka
Lapho umntwana ekhala, ngezinye izikhathi uyaganga, ungakhathazeki. Sidinga ukuqonda imbangela yezinkinga kungakusiza futhi ukukulungisa. Kodwa ngezinye izikhathi lapho abazali kudingeka wemfanelo nokunakwa ukuba bahlole isimo bese uthatha izinyathelo ezifanele esiphuthumayo.
Uma ingane lokushisa eliphezulu, futhi lokhu kuhambisana nokubuka wamemeza ngelizwi elikhulu, kumelwe ngokushesha yehlisa izinga lokushisa futhi ushayele ambulensi. Ukuba izinsana yingozi uma lapho ukukhala ungumzimba bluish, futhi emikhawulweni babe abandayo. Uma ingane liyakhala ende, uma kokuziklinya futhi kwesifuba, ukuhlanza livela, futhi ikhafule ubisi undigested, adingeka ngihlolwa kanye nokulaliswa esibhedlela.
Abazali kumelwe baqaphe uma ikhala akagcini imizuzu engaphezu kwengu-15. Kufanele sinake fontanelle. Uma eshona futhi onesigqi kakhulu - biza yokusiza umuntu ukuba aphefumule izinsana.
Ukugeza futhi bekhala becela
Omama abaningi bathola ukuthi nabancane babo bekhala futhi zigcwele izinyembezi emva ukugeza. Empeleni, impendulo isobala, futhi phezu kobuso. Ukuba izinsana amanzi - indawo ayijwayele. Bathanda amanzi, abathanda ukuba kuwo, ukubhukuda kanti futhi angageza. Ngo amanzi, izingane ukuzola futhi unethezeke, lapho bezizwa evikelwe. Uma ingane ekhala ngemva kokugeza, ngakho nje engafuni uphazamisa le nqubo emnandi.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngemva eyigeza ingane zingase zizibuze uma iqandiswe. Futhi ungathintana ukubeka eceleni iqiniso lokuthi omama abaningi ageze kahle izinsana zabo. Ingane ngenkathi okugeza ungase nethuke noma isipiliyoni imizwa ezingemnandi ezifana insipho wangena amehlo akhe babancwebe kubo. Vumelana emizweni ezingezinhle. Kanjani hhayi ukukhala!
Kafushane, omama badinga ukuba anake ingane yakho. A ukubekezela kancane, futhi uyofunda ukuqonda ulimi eyingqayizivele indoda esanda kuzalwa, okuyinto lubonakaliswa ukukhala.
Usuku lwe-April Fool sika enkulisa. Apreli 1: Script ngoba izingane